Polyester Cotton Poplin lamba, lamba vita amin'ny twill Shirt, Plain Poplin - Ruimian
Azontsika atao ny manamboatra habe amin'ny lamba vita amin'ny greige, fandokoana, fandokoana ary lamba vita pirinty izay azo ampiasaina amin'ny fanaovana pocketing, lining, shirting, akanjo, kiraro, kitapo, kitapo ary lamba an-trano, ext. Azontsika atao ihany koa ny namita ity lamba ity amin'ny alàlan'ny famafazana (hoditry ny paiso). Porofo ny rano, ny fihemorana mialoha, ny fandrehitra ny afo, ny hazo-miorim-paka
Mba hamolavola fanavaozana sy fitohizan'ny asa maha-mpandraharaha ho hery manosika, hanamboarana orinasa lehibe, asa fampiasa amin'ny renivohitra, fitantanana marobe ary tanjaka fanatanjahantena ho lalam-pirenena, miaraka amin'ny toekarena karbonika ambany, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny endriny ho toy ny tari-dàlana. indostrian'ny fanontana sy fandokoana.
Ruimian dia manana fitaovam-pamokarana an-trano sy iraisam-pirenena; ny ankamaroan'ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Japon, Eoropa Andrefana, Korea Atsimo, Australia, Hong Kong, Torkia ary ireo firenena sy faritra hafa.
Hebei Ruimian Co, Ltd dia mpamorona manokana sy mpanondrana lamba. Azontsika atao ny manamboatra habe amin'ny lamba vita amin'ny greige, fandokoana, fandokoana ary lamba vita pirinty izay azo ampiasaina amin'ny fanaovana pocketing, lining, shirting, akanjo, kiraro, kitapo, kitapo ary lamba an-trano, ext. Azontsika atao ihany koa ny namita ity lamba ity amin'ny alàlan'ny famafazana (hoditry ny paiso). Porofo ny rano, ny fihemorana mialoha, ny fandrehitra ny afo, ny hazo-miorim-paka
35% landihazo 65% lamba vita amin'ny polyester, combed ...